Ukubiza ibhulogi kungaba nzima kakhulu, ikakhulukazi uma usanda kushayela yonke ibhulogi nokufaka uphawu lokufaka uphawu. Futhi uma ufana nami, ungase uchithe amahora ucabangisisa ngegama, kuphela ukuphela ngohlu lwabantu abathandayo.
Ngiyajabula ukuthi ucele! Uma uhlobo oluzonda ngempela ukwenza amagama noma olwesabekayo nje, ngiye ngathola amathiphu ambalwa namacebo ambalwa ukukusiza ukuthi udale futdale ukhethe igama eliphelele ibhulogi yakho.
2 Ithiphu # 2: „Yiba ne-Thesaurus Ready Futhi Thatha Creative“!
3 Ithiphu # 3: Sebenzisa amagama, ama veiksmažodžiai, noma ngisho namazwi achazayo ahlobene Nawe kanye nokuqukethwe kwakho
3.1 I lygio lygis „yePro“: „Ukusebenzisa i-Made-up Word noma“ Ukufaka Amazwi Akho Amazwi
4 Ithiphu # 4: Uma Yonke Ihluleka, „Sebenzisa i-Blog“ vardas / Žodžių generatorius
„Zibuze le mibuzo emine“:
Yiluphi uhlobo lwethembo (okuvamile, olubi, njll) kuyoba khona?
Igama lebhulogi yakho kufanele lihlotshaniswe nohlobo lokuqukethwe okwenzayo. „Cabanga ukuthi unomlando obizwa ngokuthi“ "„i-Foodie“ kampelis" kodwa okuqukethwe kwakho konke okuphathelene nokubuyekezwa kwemikhiqizo yemisindo yemvelo yamadoda, uzophelisa abafundi abadidekile ababengalindele ibhulogi yokudla.
Uma ufuna qala ibhulogi yokudla, kufanele usebenzise amagama ahlobene nokudla noma ukudla (isib. Ukuphuza, i-vegan, inempilo, ukuxuba, njll).
Uma ibhulogi yakho imayelana namasu wokumaketha okudijithali, sebenzisa amagama angukhiye ahlobene nalawo mboni noma asebenzise imigomo etiile (imboni ye-SEO, ukumaketha kwe-digital, i-SEM nokunye).
Ithiphu # 2: „Yiba ne-Thesaurus Ready Futhi Thatha Creative“!
Kuleli phuzu, kufanele ube nomqondo wokuthi yiziphi amagama ezizochaza kahle ibhulogi yakho. Manje kuza ingxenye ejabulisayo! Tai yra „tezauras“, „uqhubekele phezulu thesaurus.com“, „Futhi hlola amagama afanayo okungasetshenziselwa igama lakho lebhulogi“.
Hlanganisa lawo mazwi ku -sasausus.com futhi uzothola amagama afana nesidla, i-grub, i-fresh, nonungile, injabulo, i-goodies, ukudla, i-munchies, eqinile, i-hearty, i-veggies, nenjabulo. Engeza amanye alawo mazwi ndawonye (njengokuthi i-munchies ye-vegan or zokupheka ukudla okufanele) futhi voila, unegama lebhulogi yakho.
Uma unamathele ukuzama ukucabanga ngamagama ukubiza ibhulogi yakho, ungasebenzisa njalo i-thesaurus uhlu oluthile lwamagama ongawasebenzisa.
Ithiphu # 3: Sebenzisa amagama, ama veiksmažodžiai, noma ngisho namazwi achazayo ahlobene Nawe kanye nokuqukethwe kwakho
Ungase unqume ukuthi ukusebenzisa i-thesaurus ngokwanele, kodwa uma ufuna ngempela ukuthatha umdlalo wakho wokubiza igama elilandelayo, qala ukufaka amagama, izenzo kanye / noma amagama achazayo.
Ukwengeza amagama, izenzo, namazwi achazayo kungenza ngokwezifiso igama lakho lebhulogi, okwenze kube eyakho ngokukhethekile. Ngaphezu kwalokho, kusiza ukugwema ukugqokwa namanye amasayithi noma amabhulogi afana neyakho.
Naujausi internetiniai tinklalapiai, nepageidaujami, kad nepatenkinti amagama achazayo ahlobene nawe njengebhulogi, okungaba: u-bosas, umfana, intombazane, oqalayo, ukudla, izeluleko, isidlo sasekuseni, isidlo sakusihlwa, isidlo sasemhu,.
Zibeke ndawonye futhi uzothola amagugu afana nokudla okufanelekile kwentombazane, i-vegan bosas munchies, ukupheka kwekhishi ehlanzekile, noma i-club yokudla enempilo.
I lygio lygis „yePro“: „Ukusebenzisa i-Made-up Word noma“ Ukufaka Amazwi Akho Amazwi
Lokhu kudinga kancane ukucabanga okungaphandle kwe-ibhokisi kodwa okwenziwe kungaba yindlela enhle yokwengeza kumnandi egameni lakho lebhulogi. Ezinye izibonelo ezinhle zizoba yi-snackzilla, i-veganizuota, i-sizzlerella, i-sveika.
Ungesabi ukuzama zonke izinhlobo zamagama futhi ujabule ngawo. Neišmeskite visos kasdieninės elipholilės okungekho, pažadinkite, kaip jūs esate!
Ithiphu # 4: Uma Yonke Ihluleka, „Sebenzisa i-Blog“ vardas / Žodžių generatorius
Mhlawumbe uzame wonke amathiphu ngenhla futhi awukwazi ukuvela ngegama elihle kakhulu. Azikho izinkinga! Zama ukusebenzisa amagama / amagama akhiqiza ezinye iziphakamiso ezinhle.
„Amasayithi afana“ yra I-Wordroid.com „iyithuluzi elhle lokuza nenhlanganisela yegama elijabulisayo futhi kulula ngempela ukwenza“. Vele ufake igama elihlobene nokuqukethwe kwakho, chofoza inkinobho ye "wordoids", futhi izokunika uhlu lwamagama ongawasebenzisa.
„Okuhle nge-Wordroids“, „ukuthi ungabeka“, „umkhawulo wamagama akho“, „uchaze ikhwalithi yamagama“, naudoti amatematinų kubus, futhi ufake „ngisho nokutholakala kwegama lesizinda“. Lokhu kusho ukuthi ungabheka ukuthi igama olithandayo ku-.com elibhalisiwe noma cha cha, ukukhipha ukucindezeleka kokukhwabanisa okumangalisayo nokuthola ukuthi kuthathwe.
Kunezindlela eziningi zokubiza ibhulogi futhi ekugcineni, kungcono kuwe ukuthi unquume ukuthi yilokho.
Noma kunjalo, ukudala igama akudingeki kube inqubo yokubuhlungu. Jabulela futhi ube nobuciko kuwo futhi abafundi bakho bazobona lokho futhi.
Khumbula, ayikho imithetho enzima uma ifika ekwenzeni igama. Uma nje uqinisekisa ukuthi ibuyele emuva kokuqukethwe kwakho, ungaba ngukudala njengoba ufuna!